Tokyo inozivisa COVID-19 mamiriro ekukurumidzira asi Tokyo Olimpiki ichiri kuenda?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Japan Kuputsa Nhau » Tokyo inozivisa COVID-19 mamiriro ekukurumidzira asi Tokyo Olimpiki ichiri kuenda?
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Japan Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • Sports • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Gurukota reJapan Yoshihide Suga
Guta guru reJapan rinopinda mune ino nyowani mamiriro ekukurumidzira asingasviki mavhiki matatu zvisati zvarongwa kuitisa 2020 Tokyo Olimpiki Mitambo.
Mamiriro ezvinhu matsva ekukurumidzira akafanirwa kuziviswa muTokyo pakati pe spike mune itsva COVID-19 kesi.
Mamiriro matsva ekukurumidzira achange achishanda munzvimbo yeTokyo kubva muna Chikunguru 12 kusvika Nyamavhuvhu 22.
Tokyo yakashuma 920 nyowani COVID-19 makesi nemusi weChitatu, huwandu hwayo hwepamusoro hwezuva nezuva kubvira May 13.
Mutungamiriri weJapan Yoshihide Suga akazivisa nhasi kuti mamiriro nyowani ekukurumidzira achafanirwa kuziviswa muTokyo pakati pechihwande mumatare matsva eECVID-19.
Guta guru reJapan rinopinda mune ino nyowani mamiriro ekukurumidzira asingasviki mavhiki matatu zvisati zvarongwa kuitirwa 2020 Mitambo yeOlympic.
Sekureva kweMutungamiriri, nyika nyowani yekukurumidzira ichange ichishanda munzvimbo yeTokyo kubva muna Chikunguru 12 kusvika Nyamavhuvhu 22.
Suga akati huwandu hwevagari muTokyo vane hutachiona hwecoronavirus huri kuramba huchiwedzera, uye matanho echimbichimbi - asina kusimba pane kuzara - anofanirwa kubatsira kudzora kupararira kwehutachiona uye kurerutsa kumanikidza kuzvipatara zvematunhu makuru zviri kutambura kupa zvakakwana mibhedha.
Mutungamiriri akawedzera kuti aizo "tora nhanho dzese dzinokwanisika" kudzivirira kuwedzera kupararira kwehutachiona.
Mamiriro ekukurumidzira akawedzerwawo kuOkinawa Prefecture, nepo quasi-emergency matanho eOsaka, Saitama, Chiba uye Kanagawa matunhu achawedzerwa kusvika Nyamavhuvhu 22.
Sarudzo yepamutemo pamamiriro ekukurumidzira eTokyo achaziviswa neChina mushure memusangano wevanoona nezvehutano.
Tokyo yakarongerwa kutora iyo Mitambo yeOlympic ye2020 kubva muna Chikunguru 23 kusvika Nyamavhuvhu 8 - gore rakapfuura kupfuura pakutanga zvarakarongwa nekuda kwekumbomiswa kwakakonzerwa nedenda re COVID-19.
Pakave nekupokana kwakawanda kuruzhinji kune chiitiko chikuru chemitambo uye mushandirapamwe wepamba kuti ubviswe hazvo.
Sekureva kwevamwe vekunze, maOlimpiki angangoenderera pasina vateereri, iyo Mitambo yaizoitirwa kuseri kwemasuo akavharwa, kunyangwe chiziviso chaSuga chisina kutsigira izvi.
2020 Tokyo Olimpiki varongi vakatomisa miganho yakasimba paMitambo, kusanganisira kurambidza vateereri vekunze uye kudzikisira huwandu hwevateveri kusvika zviuru gumi kana hafu yenzvimbo imwe neimwe yenzvimbo.